Marxaladda saddexaad ee Alassane Ouattara? "Go'aankaygu waxa uu ku dhowyahay" - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Marxaladda saddexaad ee Alassane Ouattara? "Go'aankeeyga ayaa la igu dhowyahay" - JeuneAfrique.com
Marxaladda saddexaad ee Alassane Ouattara? "Go'aankeeyga ayaa la igu dhowyahay" - JeuneAfrique.com
Isagoo ka codsaday shirwaynaha Mo Ibrahim Foundation inuu damacsan yahay musharaxa muddada sadexaad, ayuu madaxweynaha Ivory Coast sheegay in "go'aankiisa uu ku dhawaaday".
Alassane Ouattara ayaa ka jawaabtay laba qaybood oo su'aasha ah isaga oo ku jira shirkii Mo Ibrahim Foundation ee lagu qabtay Abidjan, 5 iyo 6 bishii April.
Naqdiga ayaa ah in uu ka tago waajibaad cusub: "Shaqada 'madaxweynaha', waxay siddeed sano ahayd tan iyo markii aan sameeyo. Marnaba xafiis ma aanan qaban muddo lix sano ah. Marwalba waxaan aaminsanahay in ay qaadato jiil cusub oo Afrika ah. 75% Afrikaanka ayaa ku hoos jira 35 sano. Madaxweynaha Faransiiska ee 40, wiilkayga ugu weyn ee 52 sano jir ah. Way cadahay in aniga ii yahay, waddadu waxay tahay in loo wareejiyo jiil cusub. Waxay u egtahay mid cad. Hadda, sababtoo ah Linas-Marcousis [Heshiisyada nabadda ee saxiixay 2003, ed], ma dejinno da'da xadaynta dastuurkeena. Laakiin anshaxku wuxuu naga jeclaan lahaa in aanu macquulno, "ayuu yiri.
Aragtida, dhaqanka iyo macnaha guud
Laakiin madaxweynaha Ivory Coast in ay si degdeg ah si loo caddeeyo: "Sidaas ayaan ma leh in aan u socday, dareenka. "Maxaa yeelay, waxaa jira wax ku ool ah," Félix Houphouët-Boigny sheegay in halyay ah waa in tixraac saddex waxyaalood: Ilaah, dadka iyo qalbi adiga ku gaar ah, "ayuu hadalkiisa raaciyay Alassane Ouattara.
Waxaan haystaa saaxiibo badan oo aan kaala hadli doono ka hor inta aan go'aankeyga kama danbaysta ah aan la gaarin, laakiin waxaa la igu dhow yahay
"Aad baan u rumeeyaa, waxaan rajeynayaa inuu Ilaahay i siin doono caafimaad iyo waqti dheer. Dadka reer Ivoryo ayaa ii doortay 83% 2015. Ma jiri karo abaalmarin qurux badan. Oo markaas, waxaa jira damiirkaaga. Su'aashu waxay tahay: miyuu dalkaagu gaadhay hadafyadaadii aad ku soo gashay meeshan? Miyuu yahay mid xasilloon, oo ammaan ah? Ma leedahay koox samayn karta waxyaabaha soo socda? Markaad ka jawaabto su'aalahan, inta soo hartay waxay noqoneysaa mid sahlan. Sidaas, waxaan go'aan ka gaari doonaa sanadka soo socda. Waxaan haystaa saaxiibo badan oo aan kaala hadli doono ka hor inta aan go'aankeyga kama danbaysta ah aan la gaarin, laakiin waxay ku dhowdahay in la qaado. "
Hadalladaasi waxay soo koobayaan gobolka maskaxda ee Ouattara, sida ay soo bandhigeen eheladiisa. Sida laga soo xigtay iyaga, ADO ma rabto in ay isu taagto laakiin kama hadli doonto labaad haddii jawigu u baahan yahay. Si aad u fahamto haddii musharixiintiisa uu doorto uusan awoodin in uu gaaro go'aan mideysan oo haddii Henri Konan Bédié ama Laurent Gbagbo ay go'aansadaan inay noqdaan.
Bilihii ugu dambeeyay, madaxwaynaha ayaa si joogta ah ugu xushay doorashadan gaarka ah. Alassane Ouattara ayaa aaminsan in isbeddelka Dastuurku uu dib u dhigayo dhammaan xisaabiyeyaasha si eber ah iyo in doorashadiisa 2010 iyo 2015 aysan tirin. "Dastuurka Cusub wuxuu ii oggolaadaa inaan u adeego labo shuruudood laga bilaabo 2020 ", ayuu yiri June 2018.
Tarjumaad ka soo horjeeda mucaaradka iyo indho-indheynayaasha qaarkood, kuwaas oo sidoo kale xusuusnaya in markii la soo saaray 2016ADO weli ma sheegin suurtogalnimada in mar labaad la ordo.
Horraantii Janaayo 2017, wuxuu xitaa xaqiijiyay inuu doonayo inuu ka tago goobta dhamaadka xilli-labaad. "Munaasabada sanadka 75, tani waxay iigu keeneysaa inaan dib u xaqiijiyo in hay'adaha Jamhuuriyadda ee dhowaan la dhisi doono ay u oggolaan doonaan inaan fasax ku qaato 2020," ayuu yiri intii lagu jiray xafladda furitaanka salaan u noqoshada diblomaasiyadeed.
Waxa kaliya ee ku jira Nofeembar 2017 in uu si rasmi ah u soo saari doono fikradda markii ugu horeysay. "Hore, ma soo bandhigi doono . [...] Siyaasadda, marnaba ma dhihi maya. Waardinaya 2020 si aan u ogaado jawaabtayda, "ayuu u sheegay France 24, marxaladihii Midowga Afrika ee Midowga Yurub.
Dumarka ayaa la filayaa in ay soo afjaraan horaantii 2020, marka Rally ee Houffouetists for Democracy and Peace (RHDP) ay magacaabi doonaan musharaxiisa shirwaynaha. Dhismaha xafladda ayaa bilaabmay dhammaadkii Janaayo. RHDP hadda waxay leedahay talo siyaasadeed. Abuuray on April 7, 112 waxa ka kooban yahay xubno ka mid ah kuwaas oo dawladda oo dhan, xildhibaan iyo guurti iyo sidoo kale qaar ka mid ah dad ku dhow inay xoog sida Masséré Toure, walaasha agaasimaha ADO iyo isgaarsiinta Madaxweynaha. In la dhamaystiro habsami u fulinta ee xisbiga, guddiga fulinta yar la dhakhsaha badan loo magacaabay.
Jeune Afrique wuxuu ku dhawaaqay is-beddelka wasiirrada ee dalka Cameroon bishii May
Tani waa sababta Cabral Libi u duushay badbaadinta Kamto - CAMEROON MAGAZINE